Provigil vs. Adderall: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
घरपालुवा जनावर कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार समुदाय, कम्पनी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण कम्पनी कम्पनी, समाचार कम्पनी, चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Provigil vs. Adderall: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Provigil vs. Adderall: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Provigil र Adderall दुई औषधि औषधि हो जो नार्कोलेप्सीको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ र साथै अन्य विकारहरू। Narcolepsy एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्लिप डिसअर्डर हो जुन मस्तिष्कको तपाईंको निद्रा र जाग चक्रलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई असर गर्छ। यसले प्राय: रातमा अवरोधको निन्द्रा निम्त्याउँछ र त्यसकारण अत्यधिक दिनको तन्द्रामा। यो अनुमान गरिएको छ कि संयुक्त राज्य अमेरिका मा करीव 200,000 मानिस मादक पदार्थ छ । नार्कोलेप्सीले दैनिक गतिविधिहरू र अरूको सुरक्षालाई असर गर्न सक्छ, किनकि जो कोही नर्कोलेप्सीबाट पीडित छ ड्राइभि or वा अपरेटि while उपकरणको बेला अत्यधिक थकित हुन सक्छ। Provigil र Adderall दुबै नार्कोलेप्सीको उपचारमा अनुमोदित छन् तर समान प्रकारको औषधि छैनन्, र हामी उनीहरूको भिन्नताहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं।
Provigil र Adderall बीच मुख्य भिन्नता के हो?
Provigil (modafinil) एक पर्चेको औषधि हो जसले जागृतिलाई बढावा दिन्छ तर अन्य परम्परागत केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS) भन्दा भिन्न हो जस्तै Adderall। प्रोविगिलले जागृतिलाई बढावा दिने कार्यको संयन्त्र पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिएन, यद्यपि यो मस्तिष्कको विशेष क्षेत्रहरूमा कार्यहरूद्वारा गरिएको हो भन्ने सोचाइ छ। जबकि अन्य सीएनएस उत्तेजकहरूले डोपामाइन वा सिम्पाथोमिमेटिक मार्गहरू समावेश गर्ने संयन्त्रहरूको माध्यमबाट काम गरेको जस्तो देखिन्छ, प्रोभिगिलले यी मार्गहरूलाई प्रभाव पार्दैन जस्तो देखिन्छ।
Provigil मौखिक ट्याब्लेटमा १०० मिलीग्राम र २०० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छ। Provigil एक औषधि प्रवर्तन एजेंसी (डीईए) द्वारा एक अनुसूची IV नियन्त्रित पदार्थ मानिन्छ। Provigil को लागी सावधानीपूर्वक औषधि दुरुपयोग को ईतिहास संग रोगीहरु को उपयोग गर्नु पर्छ।
Adderall एम्फेटामाइन साल्टको संयोजन हो, xt देखि १ अनुपात dextroamphetamine (d-amphetamine) र levoamphetamine (l-amphetamine) समावेश गर्दछ। यो एक नुस्खा औषधि हो जुन नार्कोलेप्सीको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ र अधिक सामान्य रूपमा ध्यान घाटा hyperactivity डिसऑर्डर (ADHD)।
अन्य सीएनएस उत्तेजकहरू जुन तपाईं परिचित हुन सक्नुहुन्छ रिटालिन, फोकलिन, र भ्याभन्से समावेश गर्दछ। सम्पूर्ण रूपमा तत्काल रिलीज मौखिक ट्याब्लेटहरू mg मिलीग्राम, .5..5 मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, १२..5 मिलीग्राम, १ mg मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छन्। Adderall XR एक विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल फॉर्मूलेसन हो र mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, १ 15 मिलीग्राम, २० मिलीग्राम, २ mg मिलीग्राम, र mg० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छ।
डीईए Adderall एक अनुसूची II मादक ड्रग समेट्छ। Adderall आदत-निर्धारण हो र दुरुपयोग को उच्च संभावना छ भन्ने तथ्यका कारणले गर्दा, यो औषधि प्राप्त गर्नका लागि प्रतिबन्ध र दिशानिर्देशहरू छन्, जुन राज्य अनुसार फरक हुन्छ। एडवर्डर ड्रग दुरुपयोगको ईतिहासको साथ बिरामीहरूमा सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्दछ।
Provigil र Adderall बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग वेकफुलनेस-प्रोमोटरिंग उत्तेजक (साइकोस्टिम्युलेन्ट) केन्द्रीय नर्भस उत्तेजक
जेनेरिक नाम के हो? Modafinil Amphetamine लवण (डी- amphetamine र l-amphetamine)
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेटहरू मौखिक ट्याब्लेटहरू र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलहरू
मानक खुराक के हो? २०० मिलीग्राम एक पटक Mg मिग्रि एक पटक वा दुई पटक पटक पटक mg० मिलीग्राम / दिन सम्म
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? किशोर १ 17 बर्ष र माथिका; वयस्कहरू3वर्ष र माथिका बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरू; वयस्कहरू
सर्तहरू Provigil र Adderall द्वारा उपचार
Provigil र Adderall दुबै खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा माइनकोलेप्सीको उपचारमा अनुमोदन गरिएको छ, तर प्रत्येक औषधिको अर्को संकेत पनि छ। एडीएलड्रल प्राय: ADHD लाई उपचार गर्नका लागि यसको संकेतको लागि निर्धारित छ। Provigil ADHD को उपचारमा अफ-लेबल प्रयोग गरीएको छ। अफ-लेबल प्रयोग खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदन गरिएको छैन भनेर एक संकेत को लागी एक औषधि को उपयोग हो। प्रोविगिल अन्य निद्रा सम्बन्धित विकारहरूमा पनि स्वीकृत हुन्छ, शिफ्ट वर्क डिसअर्डर र स्लीप एपनिया सहित।
सर्त Provigil Adderall
ध्यान hyperactivity घाटा डिसअर्डर (ADHD) अफ-लेबल हो
सिफ्ट कार्य निद्रा विकार हो हैन
अवरोधक निद्रा एपनिया हो हैन
थकान अफ-लेबल हैन
Provigil वा Adderall अधिक प्रभावी छ?
अमेरिकी स्लीप मेडिसिन एकेडेमी मानक अभ्यास प्रकाशित दिशाहरु , जसमा दुवै प्रोविगिल र एडडेरल दुवै नार्कोलेप्सी र अत्यधिक निन्द्राको उपचारमा प्रभावकारी एजेन्टको रूपमा समावेश गर्दछ। दुबै औषधिहरू बानी बन्ने सम्भावना हुन्छ, तर एडकोरलको मादक स्थिति आदत गठन र दुरुपयोगको लागि यसको अधिक सम्भावित जनाउँछ। Modafinil प्रतिकूल घटनाहरूको कम घटना भएको देखाइएको छ र अन्य सीएनएस उत्तेजकहरूको तुलनामा दुरुपयोगको लागि कम सम्भाव्यतासँग राम्रोसँग सहन गरिएको छ। यी कारणहरूले गर्दा यो सामान्यतया माइनकोलेप्सीको लागि पहिलो-लाइन उपचार मानिन्छ।
बिमा बिना फ्लू शट कति छ
केवल तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले माइनकोलेप्सी पत्ता लगाउन सक्दछन् र कुन उपचार तपाईको लागी उत्तम हो निर्णय गर्न सक्छ।
कभरेज र प्रोविजिल बनाम Adderall को लागत तुलना
Provigil एक औषधी हो जुन सामान्यतया व्यावसायिक बीमाले ढाक्छ। चिकित्सा योजनाहरु द्वारा कभरेज फरक हुन सक्छ वा विशेष अपवादहरु बनाउन आवश्यक पर्दछ। Provigil को pocket 5050० भन्दा बढि जेब खर्च हुन सक्दछ, तर सिंगलकेयरबाट कूपनको साथ, तपाईंले जेनेरिकको -० दिने आपूर्ति supply than than भन्दा कममा पाउन सक्नुहुनेछ।
एडेलरल एक पर्चेको औषधि हो जुन सामान्यतया व्यावासायिक बीमाले ढाक्छ। चिकित्सा योजनाहरु द्वारा कभरेज पनि फरक हुन सक्छ वा विशेष अपवादहरू बनाउन आवश्यक पर्दछ। Adderall को लागी आउट-अफ-पकेट मूल्य $ 300 भन्दा बढि हुन सक्छ। एक एकलकेयरको साथ तपाईं जेनेरिक फारम खरीद गर्न सक्नुहुन्छ पर्याप्त कम लागि। छानिएका फार्मेसीहरूमा केवल एक सिंगलकेयर एडेलरल कुपन प्रस्तुत गर्नुहोस् र जेनेरिकको लागि सोध्नुहोस्।
मानक खुराक ,०, २०० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ,०, mg० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
एकलकेयर लागत $ 60- $ 270 फार्मासिष्टको साथ मूल्य जाँच गर्नुहोस्
Provigil vs Adderall को सामान्य साइड इफेक्टहरू
Provigil र Adderall ले केहि समान प्रतिकूल घटनाहरूको कारण गर्दछ, Adderall बाट साइड इफेक्टको व्यापकता डाटा डाटा प्याकेज सम्मिलित गर्न अनुपलब्ध छ। दुबै औषधिहरूले उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) र टाचिकार्डिया (बढेको मुटुको दर) जस्ता गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउँदछ। Provigil र Adderall दुबै भोक को एक हानि को कारण पनि हो।
Provigil ले बिरामीहरूको एक महत्त्वपूर्ण संख्यामा टाउको दुखाइ र मतली हुन सक्छ। यी साइड इफेक्टले दैनिक जीवन र उत्पादकतालाई असर गर्न सक्दछ, र यदि ती कष्टप्रद र स्थिर छन् भने, विकल्पहरूको बारेमा छलफल गर्न तपाईंले आफ्नो प्रदायकसँग कुरा गर्नुपर्छ। अकस्मात् तपाईको प्रदायकको ज्ञान बिना यी औषधि लिन बन्द नगर्नुहोस् किनकि तपाईले फिर्ता लक्षणहरू अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
निम्नलिखित सूची संभावित साइड इफेक्ट को एक समावेशी सूची समावेश गर्न को लागी हैन। साइड इफेक्टको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंले आफ्नो हेल्थकेयर प्रदायकसँग परामर्श लिनु पर्छ।
टाउको दुखाई हो 4% हैन n / a
मतली हो एघार% हैन n / a
नर्भस हो %% हैन n / a
चिन्ता हो %% हैन n / a
छातीको दुखाइ हो %% हैन n / a
उच्च रक्तचाप हो %% हो परिभाषित छैन
टाचिकार्डिया हो दुई% हो परिभाषित छैन
धमकी हो दुई% हो परिभाषित छैन
अनिद्रा हो %% हो परिभाषित छैन
भोक कम गर्नु हो %% हो परिभाषित छैन
तौल घट्नु हैन n /aहो परिभाषित छैन
सुख्खा मुख हो %% हो परिभाषित छैन
चक्कर हो %% हो परिभाषित छैन
स्रोत: Provigil ( डेलीमेड ) Adderall ( डेलीमेड )
Provigil vs Adderall को ड्रग अन्तरक्रिया
मोडेमाइन अक्सिडेज अवरोधकर्ताहरू (MAOIs) जस्तै selegiline र Linezolid को साथ संयोजनमा Adderall बेवास्ता गर्नु पर्छ। एमएओ अवरोधकर्ताहरूले ढिलो एम्फैटामाइन मेटाबोलिज्म, नोरपाइनफ्रिन र अन्य मोनोमाइन्सको स्नायु समाप्तबाट एम्फाटामाइनको प्रभाव बढाउँदै टाउको दुखाइ र उच्च रक्तचाप संकट को अन्य लक्षण पैदा गर्दछ। जबकि यो अज्ञात छैन यदि Provigil सँग समान प्रभाव छ MAOIs सँग दिईएको खण्डमा यो संयोजन पनि बेवास्ता गर्न सिफारिस गरिन्छ।
एरोडेरलसँग मिलेर सेरोटोनर्जिक औषधिहरूले सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको घटना बढाउन सक्दछ। यो सिन्ड्रोमले बिरामीलाई उत्तेजित, चक्कर आउँछ र मुटुको दर बढेको महसुस गर्न सक्छ। आम एन्टिडप्रेससन्टहरू जस्तै सेलेक्टिभ सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटरहरू र सेलेक्टिभ नोरपाइनफ्रिन रिअपटेक इन्हिबिटरसको सेरोटोनर्जिक गतिविधि हुन्छ र सावधानीपूर्वक एडडेरालको साथ संयोजनको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ।
निम्नलिखित तालिका प्रोविजिल र Adderall को लागी प्रत्येक सम्भावित औषधी अन्तरक्रिया सूचीत छैन। पूर्ण सूची र पेशेवर चिकित्सा सल्लाहको लागि तपाईंको फार्मासिष्ट वा डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्।
benadryl एक सकारात्मक औषधि पर्दा कारण हुनेछ
औषधि औषधि वर्ग Provigil Adderall
डेसेभेन्फाक्सिन छनौट नरेपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (SNRIs) हैन हो
सोडियम ल्याक्टेट एन्ट्यासिड हैन हो
टोपिरामेट Antiepileptic हैन हो
ट्रामाडोल ओपिओइड पीडा राहत हैन हो
Frovatriptan 5HT3 विरोधी (ट्रिप्टन) हैन हो
Nortriptyline Tricyclic antidepressants हैन हो
लान्सोप्रजोल प्रोटोन पम्प अवरोधकर्ताहरू (पीपीआई) हैन हो
Provigil र Adderall को चेतावनी
Provigil र Adderall प्रत्येक हृदय घटनाहरु जस्तै छाती दुखाई र धमकी को वृद्धि संग सम्बन्धित छ। एडरेल स्ट्रोक र मायोकार्डियल इन्फेक्शनहरूमा वृद्धिसँग जोडिएको छ। यी पूर्व-अवस्थित कार्डियक सर्तहरू भएका बिरामीहरूमा हुने बढी सम्भावना हुन सक्छ। राष्ट्रपतिहरूले यी सर्तहरूको लागि स्क्रिन गर्नुपर्दछ र ती बिरामीहरूलाई हड्डीको विकृति हुन सक्नेहरूका लागि यी औषधिहरू लेख्नुहुँदा अत्यधिक सावधानी अपनाउनु पर्छ।
Provigil र Adderall रक्तचाप र मुटुको दर मा मध्यम वृद्धि संग सम्बन्धित छ। यी प्यारामिटरहरू मोनिटर गरिनु पर्छ जब बिरामीहरूले उत्तेजक लिन्छन्।
Provigil र Adderall पूर्व अवस्थित मानसिक विकार संग बिरामीहरु मा व्यवहार गडबडी बढाउन सक्दछ। यदि उत्तेजकहरू आवश्यक छन् भने यी बिरामीहरूलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नुपर्दछ। महत्त्वपूर्ण मनोचिकित्सक ईतिहासका बिरामीहरू बढी जोखिममा हुन सक्छन्।
बच्चाहरू र किशोर-किशोरीहरूमा एडडरलको दीर्घकालीन प्रयोग वृद्धि दमनसँग जोडिएको छ। उत्तेजकहरू हुँदा अस्थायी रूपमा उपचार रोक्नको लागि प्रोत्साहित हुन सक्ने बिस्तारै बिस्तारै धीमा बृद्धि गर्ने बिरामीहरूलाई। प्राय जसो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बच्चाहरू स्कूलमा नहुँदा उपचारबाट विश्राम लिने सल्लाह दिन्छन्, जस्तै सप्ताहन्त, छुट्टीहरू र ग्रीष्म विश्रामहरूमा।
कलेज विद्यार्थीहरुमा Provigil र Adderall दुरुपयोग को मामलाहरु छन्। तिनीहरू ड्रग्स लिन सक्छन्, कहिलेकाँही सिफारिश गरिएको खुराकमा, अध्ययनको उद्देश्यको लागि जागरूकता बढाउन र उत्पादकताको लामो घण्टाको लागि।
Provigil लाई Stevens-Johnson syndrome (SJS) को घटनासँग जोडियो। SJS गम्भीर छाला प्रतिक्रिया को एक प्रकार हो जहाँ छाला छाला र छालहरु छाला मा दर्दनाक, कच्चा क्षेत्रहरु छोड्ने। यसले सेप्सिसलगायत अन्य गम्भीर संक्रमणहरू निम्त्याउन सक्छ।
यदि तपाईंले प्रोभिगिल, एडेलरल, वा समान औषधिहरूमा एलर्जी प्रतिक्रिया अनुभव गर्नुभएको छ भने तपाईंले ती लिनु हुँदैन।
Provigil vs Adderall को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
Provigil के हो?
Provigil एक पर्चेको औषधी हो जसले जागृतिलाई बढावा दिन्छ र नर्ककोलेसीको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो डीईए द्वारा एक नियन्त्रित पदार्थ मानिन्छ। Provigil मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा दुई शक्तिहरू, १०० मिलीग्राम, र २०० मिलीग्राममा उपलब्ध छ।
तपाइँ कहिले संक्रामक हुनुहुन्छ जब तपाइँ फ्लू हुनुहुन्छ
एडरेरल एक सीएनएस उत्तेजक हो जुन नारकोलेप्सी र एडीएचडीको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। यो DEA द्वारा एक अनुसूची II मादक पदार्थको रूपमा मानिन्छ यसको दुरुपयोग सम्भावनाको कारण र यो पर्चेमा मात्र उपलब्ध छ। दुबै तत्काल रिलीज ट्याब्लेटहरू र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलमा विभिन्न सामर्थ्यमा उपलब्ध छ।
Provigil र Adderall उस्तै हो?
Provigil र Adderall प्रत्येक इलाज नार्कोलेप्सी, तर तिनीहरू समान छैनन्। Provigil को संयन्त्र पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिएन, तर एडडेरल केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको बाटोहरूमा काम गर्न जानिन्छ। एडिग्राल प्रोविगिल भन्दा दुरुपयोगको लागि उच्च सम्भावनाको साथ बढी लत मानिन्छ।
Provigil वा Adderall राम्रो छ?
प्रोविगिल र एडडेराल दुबै नार्कोलेप्सीको लागि प्रभावकारी उपचार विकल्पहरू हुन्। Provigil सामान्यतया माइनकोलेप्सीको लागि पहिलो-लाइन उपचारको रूपमा मानिन्छ किनभने यो राम्रोसँग सहनशीलता प्रोफाइलको कारण हो।
के म Provigil वा Adderall प्रयोग गर्भवती हुँदा?
Provigil र Adderall गर्भावस्था कोटि सी हो, यसको मतलब सुरक्षा स्थापित गर्न पर्याप्त, नियन्त्रित अध्ययनहरू छैनन्। यी औषधिहरू गर्भावस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ जब लाभ स्पष्ट रूपमा जोखिमलाई पछाडि पार्छ।
के म Provigil प्रयोग गर्न सक्छु वा रक्सीको साथ Adderall?
Provigil र Adderall मा बिरामीहरु लाई रक्सीको सेवन सीमित गर्नु पर्छ। विशेष रूपमा, मदिराले एड्रेवलको सीरम रगतमा वृद्धि गर्न सक्दछ, र त्यसकारण महत्त्वपूर्ण रक्सीको सेवनबाट अलग रहनु पर्छ।
Provigil एक नियन्त्रित पदार्थ हो?
Provigil एक औषधि प्रवर्तन एजेन्सी (DEA) द्वारा एक तालिका IV नियन्त्रित पदार्थ मानिन्छ यसको बानी हुन सम्भावनाको कारण। यो पदार्थ दुर्व्यवहारको इतिहास भएका बिरामीहरूमा सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्दछ।
Provigil ध्यान केन्द्रित गर्छ?
Provigil ले निद्रा-जगाउने चक्रलाई नियमित गर्न मद्दत गर्दछ, अधिक सतर्क र उत्पादक वेक चक्र र उत्तम निद्राको लागि अग्रणी। यो ADHD को उपचार मा अफ-लेबल प्रयोग गरीन्छ।
के तपाई प्रतिदिन मोडाफिनिल लिन सक्नुहुन्छ?
Provigil एक नियन्त्रित पदार्थ हो र बानी बन्न सक्छ। लामो अवधिमा रहनु पर्ने बिरामीहरूलाई निर्भरता वा दुरुपयोगको स for्केतहरूको लागि नजिकबाट अनुगमन गरिनु पर्छ।
बच्चाहरूमा स्ट्रेप गलाका लागि अभिभावकको गाईड
दबाइहरु कि औषधि परीक्षण मा देखाइन्छ
छिटो तरीका कम रक्तचाप स्वाभाविक रूप मा
काउन्टर मा बिरालो एलर्जी को लागी औषधि
कति छिटो जन्म नियन्त्रण शट काम गर्दछ
बच्चाको चिनीको स्तर के हुनुपर्छ?
एक कैप्सूल मा कति कोइला छ